Madaxweyne Deni: Puntland iyadaa u madaxbanaan khayraadka dabiiciga ah ee ku jir dhulkeeda - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweyne Deni: Puntland iyadaa u madaxbanaan khayraadka dabiiciga ah ee ku jir dhulkeeda
Madaxweyne Deni: Puntland iyadaa u madaxbanaan khayraadka dabiiciga ah ee ku jir dhulkeeda
September 17, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. [Xigashada Sawirka: Puntland State House]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in Puntland ay iyadu u madaxbanaan tahay khayraadka dabiiciga ah ee ku jir dhulkeeda.
“Sida datuurka federaalka Soomaaliya iyo kan Puntland ay qorayaan dhulkeeda khayraadka ku jira intiisa badan iyadaa maamulkeeda iska leh,” ayuu ku yiri madaxweynuhu wareysi uu asbuucaan siiyay laanta Af-Soomaaliga BBC.
“Marka laga tago khayraadyada qaybtooda oo dowladda Soomaaliya in ay ka wadahadlaan ay tahay, laakiin marwalba cida dhulkeeda la maalgelinayo iyada la rabaa in ay u bandhigto dadka maalgashiga rabana u sahasho shuruucda asaasiga ah.” Ayuu ku sii daray.
Shirkado balanqaaday in $464 milyan oo maalgashi ah ay ka samaynayaan Puntland
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Sabti ah u magacaabay Cawil Maxamed Xasan oo loo yaqaan Cawil Mataan guddoomiyaha gobolka Nugaal, sida lagu digreeto ka soo baxday madaxtooyada. Cawil Mataan [...]
Madaxweynaha Puntland oo Saynab Ugaas Yaasiin u magacaabay wasiir ku xigeenka maaliyada
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa Saynab Ugaas Yaasiin u magacaabay wasiir ku xigeenka maaliyada, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday madaxtooyada Puntland maanta oo Khamiis ah. Saynab ayaa bedeli doonta wasiir ku [...]